अहिलेको भन्दा सस्तोमा स्वास्थ्य सामाग्री ल्याउनुस पुरानो टेण्डर रद्द गरेर किन्छुः महानिर्देशक श्रेष्ठ « Artha Path
स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. महेन्द्र श्रेष्ठले स्वास्थ्य सामाग्री खरिद केही महंगो भए पनि कुनै भ्रष्टाचार नभएको दाबी गरेका छन् । अहिलेको भन्दा सस्तोमा कसैले ल्याउन सके टेन्डर नै रद्द गर्ने समेत बताए । श्रेष्ठसँग विवादमा मुछिएको स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रकरणबारे ऋषि धमलाले एनआरएन रेडियोको नेपाली बहसमा गरेको कुराकानीः
तपाईं आफैँ जाँदैहुनुहुन्छ सामान लिएर ?
हामीले सामान ल्याउन पटक–पटक टेण्डर गरेय ।उहाँहरुबाट सामान आएन । त्यसपछि हामीले बोलायौं, उहाँहरुले सामान ल्याउन नसक्ने भनेर जानकारी दिइसकेपछि फेरि बोलायौं र भन्यौं, ‘कसले ल्याउन सक्छ ? नेपाल सरकारले प्लेन पठाइदिन्छ’ भनेर । जहाँ भन्नुहुन्छ हामी प्लेन पठाइदिन्छौ भनेर ठेकेदारहरुलाई बिनम्र अनुरोध गर्दा सबैले सक्दैनौं भन्नुभयो । अझ उहाँहरुलाई तीन÷चार दिन टाइम पनि दियौं तपाईं भनेर । त्यसमा कसैको एकटन, कसैको दुईटन सबैले मिलाएर ल्याउनुहोस् हामी प्लेनको व्यवस्था गरिदिन्छौं भन्यौं त्यसरी पनि उहाँहरुले सक्नुभएन । फेरि अन्तिमा कसले सक्छ प्रस्ताव ल्याउनुस् भन्यौं ।
बिलकुल ढाँट्नुहुँदैन । यो विषम परिस्थितिमा जनतालाई ढाँट्ने अपराधी हो । त्यसकारण हामीले जे सम्झौता गर्यौ, त्यसलाई तुरुन्तै वेबसाइटमा राखेका छौं । फेरि खुल्ला रुपमा भनेको छु । अहिले बजारमा सामान भनेको मूल्यमा पाइँदैन ।
के गरौं त अब कोरोनाका बिरामीलाई हेर्दै नहेरौं ? अस्पतालहरु बन्द गरौं । अस्पालमा आएका बिरामीलाई कसैले छुँदै नछुनु ? तपाईं त्यसो भन्नुहुन्छ भने हामी सामान किन्दैनौ ।
मैले अहिलेसम्म एक रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको छैन, र गर्ने नियत पनि छैन । तपाईंहरुसँग कुनै पनि त्यस्तो प्रमाण छ भने सर्वाजनिक रुपमै झुन्डिन तयार छु । अहिले असाध्यै विसम परिस्थितिको बेलामा हामीले साधानहरु ल्याएका छौं । यो सामान कुनै अस्पतालमा छैन । अहिले संसारमा महामारी फैलिएको नेपालमा पनि विरामीको संख्या बढ्यो, त्यति बेला सामान अभावका कारण स्वास्थ्यकर्मीले बिरामी हेरेनन् भने के हुन्छ ? यसैलाई मध्येनजर गरेर हामीले पहिलादेखि सामान किन्न खोजेका हौं । अहिले पनि हामीले जुन मात्रामा किन्न खोजेका हौं, त्यो अझै परिपूर्ति गर्न सकेका छैनौं । त्यसकारण कैसैले च्यालेन्ज गरेर म उपलब्ध गराउँछु भन्छ भने अहिलेसम्म यो सामानको एक रुपैयाँ पनि भुक्तानी गरिएको छैन । त्यसलाई आजै क्यान्सिल गर्न सकिन्छ । उहाँहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ, म सहयोग लिन चाहन्छु ।
ती सामान सरकारले कति बढी रकम तिर्यो त ?
पहिला काठमाण्डौमा एउटा माक्सको मूल्य ५ रुपैयाँ थियो । अहिले हामीले नेपालमै उत्पादन गर्न खोजेको माक्सलाई ८ रुपैयाँभन्दा तल उत्पादन गर्न सकिँदैन भनेर उद्योग वाणिज्य महासंघले भनेको छ । ५ को ८ भन्दा यही उत्पादन गर्न पनि ६० प्रतिशत मूल्य बृद्धि भयो । अझै उहाँहरु नाफा लिने हो भने १० रुपैयाँ पर्छ भन्ने उहाँहरुको तर्क छ । चाइना पनि हाम्रो प्लेन गयो त्यसले ३० टन ल्याउनुपर्नेमा १५ टन मात्रै बोकेर आयो । यहाँको सरकार त्यहाँका एमएसी लाग्दा पनि हामीले चाहेको जति सामान किन्न सकेनौं । ३० टन बोक्ने प्लेन १५ टन मात्रै बोकेर फर्केको छ । ४ महिना अगाडि रेट ल्याएर भ्रष्टाचार भयो भन्नु राज्यप्रतिको गैरजिम्मेवारी हो ।
यो सामान स्वास्थ्य सेवा विभागले गरिद गरेको हो । त्यसकारण सामान अडर गर्ने काम मैंले गरेको छु । यतिबेला मुलुकलाई सहयोग चाहिएको छ । यसलाई आमनेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुले हेरिदिनुस् । योभन्दा सस्तो कसले सामान दिन्छ त्यो ठाउँमा प्लेन पठाउन हामी तयार छौं । त्यो प्लेनलाई बाहान पुग्ने सामान चाहियो । अस्पतालमा सामान छैन, सामान नभएर डाक्टरहरु उपचार गर्न मानिरहेका छैनन् । अनि सामान ल्याउँदा महंगोमा किनिस् भनेर दोष लगाउनु राष्ट्रद्रोह कुरा हो । रिपोटर्स नेपालबाट साभार ।